Iwu Nzuzo | planetlibre.es - Ndị Ọzọ
esi agbanwe ntọala ụgbọelu na iphone
kedu ka ịzụ ahịa icloud si arụ ọrụ
mmelite nche apple agaghị arụnye
otu esi edozie bọtịnụ ụlọ m iphone 6
enweghị ọrụ na iphone ọhụrụ
Amụma Nzuzo (N'èzí EU)
Iwu kuki (na mpụga EU)
Nzuzo Nzuzo maka Ndị Bi na California
Amụma nzuzo maka ndị ọrụ EU
Iwu kuki maka ndị ọrụ EU
Iwu nzuzo (N'èzí EU)
Bọchị Mbido: Mee 25, 2018
planetlibre Digital Media, LLC d / b / a planetlibre Industries, ndị mmekọ ya na ndị enyemaka (the 'planetlibre' , 'anyị' ma ọ bụ 'anyị' ) ji nzuzo nke ndị ọrụ na ndị debanyere aha anyị. Anyị na-agbasi mbọ ike ịkọwapụta otu anyị si anakọta ma jiri ozi gị, iji dobe ozi gị ma nyekwa gị nhọrọ bara uru. Iwu Nzuzo a ( 'Iwu' ) na-akọwa omume nzuzo maka www.planetlibre.es mkpokọta (the 'Ebe' ), nke ndị planetlibre nwere ma rụọ ọrụ. Iwu a pụtara iji nyere gị aka ịghọta ihe ozi planetlibre na-achịkọta, gịnị kpatara anyị ji anakọta ya na ihe anyị ji ya eme.
Iwu a metụtara ọrụ ozi anyị n'ịntanetị maka saịtị ahụ maka ndị ọrụ niile ma e wezụga ndị ọrụ n'ime European Union. Iwu a anaghị emetụta data nkeonwe anakọtara site na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa ọ bụla nke atọ, gụnyere weebụsaịtị ị nwere ike ịnweta site na saịtị. Weebụsaịtị ndị ahụ na ngwa nwere ike ịnwe iwu nzuzo nke ha, nke anyị na-agba gị ume ka ị gụọ tupu ịnye ozi nkeonwe ọ bụla na ma ọ bụ site na ha. Onyinye ụfọdụ dị na Saịtị anyị, nwere ike ịnwe ọkwa ndị ọzọ gbasara omume na nhọrọ ozi. Biko gụọ nkwupụta nzuzo ndị ọzọ iji ghọta otú ha nwere ike isi metụta gị.
Biko gụọ Iwu a nke ọma iji ghọta ụkpụrụ na omume anyị gbasara ozi gị na otu anyị ga-esi agwọ ya. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na iwu na omume anyị, anaghị eji saịtị ahụ. Site na iji saịtị, ị kwenyere na Iwu a. Iwu a nwere ike igbanwe site n’oge ruo n’oge. A nọgidere na-eji saịtị gị eme ihe mgbe anyị mechara mgbanwe iji bụrụ nnabata mgbanwe ndị ahụ, biko biko tụlee Iwu maka oge maka mmelite.
M UAKA N’AFỌ 13
Ebughị saịtị ahụ maka ụmụaka n'okpuru afọ 13, anyị anaghị akpachara anya na-anakọta ozi nkeonwe n'aka ụmụaka n'okpuru 13. Ọ bụrụ na anyị amụta na anyị anakọtara ma ọ bụ nata ozi nkeonwe n'aka nwatakịrị nọ n'okpuru 13 na-enweghị nkwenye nke nkwenye ndị nne na nna, anyị ga-ehichapụ ozi ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na anyị nwere ozi ọ bụla sitere na ma ọ bụ banyere nwatakịrị na-erubeghị afọ 13, biko kpọtụrụ anyị na nzuzo@planetlibre.org .
Ozi anyị na-anakọta na otu anyị si anakọta ya
Anyị nwere ike ịnakọta ozi gbasara gị mgbe ị na-emekọrịta ma jiri saịtị. Ozi a nwere ike ịgụnye ozi nkeonwe (dịka aha, adreesị ozi-e, adreesị ozi-e, akara ekwentị na nkọwa kọntaktị ndị ọzọ ọ bụla), ozi teknụzụ (dịka adreesị IP, ụdị ihe nchọgharị, njirimara ngwaọrụ) yana ozi ojiji (dịka ibe weebụ ị gara, mgbasa ozi ị pịa na). Anyị nwere ike ikpokọta ụdị ozi a ọnụ, ma na-ezo aka na ozi niile a na Nzuzo Nzuzo a dika 'Ozi' . Enwere ike ịnakọta ozi dị ka akọwara n'okpuru na site na iji kuki, mgbama weebụ, pikselụ, na teknụzụ ndị ọzọ yiri anyị site n'aka anyị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na nnọchite anyị. N'okpuru ebe a bụ ụdị ozi anyị nwere ike ịnakọta:
Ozi Prov Nye Anyị.
mgbe ị debanyere aha ma ọ bụ jiri saịtị a, ma ọ bụ denye aha na ọrụ ọ bụla na saịtị ahụ, anyị nwere ike ịjụ gị ka ịnye ozi nkeonwe nke a ga-eji mata gị, dị ka aha, adreesị ozi-e, adreesị ozi-e, akara ekwentị, ma ọ bụ ihe ọ bụla nkọwa kọntaktị ndị ọzọ.
mgbe ị na-eji saịtị ahụ iji gwa ndị ọzọ okwu ma ọ bụ biputere, bulite, gosipụta ma ọ bụ chekwaa ọdịnaya ọ bụla dịka nkọwa, foto, vidiyo, ozi ịntanetị, mgbakwunye, ntinye okwu, yana ọdịnaya ndị ọzọ ị mepụtara (mkpokọta, 'Onyinye Ndị Ọrụ') na ọha. mpaghara nke saịtị. Enwere ike ibunye onyinye gị na ndị ọzọ ma anyị enweghị ike ijikwa omume nke ndị ọzọ ị nwere ike ịhọrọ isoro Onye ọrụ gị. Anyị enweghị ike igbochi iji Ozi a ọzọ mgbe emechara ọha.
anyị nwere ike ịjụ gị ka ịnye Ozi mgbe ị banyere asọmpi ma ọ bụ asọmpi a na-akwado anyị ma ọ bụ zaghachi nyocha nke anyị nwere ike biputere ma jụọ iji mezue na saịtị.
mgbe ị na-agwa anyị okwu iji kọọ nsogbu na saịtị, ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla ọzọ. Anyị nwere ike ịdekọ ndekọ na akwụkwọ ozi nke ozi gị (gụnyere adreesị ozi-e, akara ekwentị, na ozi onwe onye ọ bụla ọzọ ị nyere).
mgbe ị debanyere aha maka ọrụ ọ bụla akwụ ụgwọ ma ọ bụ tinye iwu ọ bụla na saịtị ahụ, anyị nwere ike ịdebe nkọwa nke azụmahịa ị na-ebu site na saịtị ahụ na nke mmezu nke iwu ọ bụla (rịba ama na enwere ike ịchọrọ gị ịnye ozi ego tupu ịnye iwu site na saịtị).
mgbe ị na-eji saịtị ahụ, dịka maka ajụjụ ọchụchọ, lelee akụkọ ihe mere eme, nyocha peeji, ịlele ọdịnaya anyị na-ewepụta, ma ọ bụ wụnye mgbakwunye anyị ọ bụla.
Nka na ụzụ, ojiji, na nyocha.
Anyị nwere ike ịnakọta ụfọdụ ozi teknụzụ na ojiji mgbe ị na-eji Saịtị anyị, dị ka ụdị ngwaọrụ, ihe nchọgharị, na sistemụ arụmọrụ ị na-eji, njirimara ngwaọrụ pụrụ iche, adreesị IP, ngwaọrụ na ntọala ihe nchọgharị, ibe weebụ ị gara, gụnyere ozi gbasara otu ị si emekọrịta na Saịtị anyị na nke ndị mmekọ anyị na ndị ọzọ na ozi na-enye anyị ohere ịmata ma jikọta ọrụ gị n'ofe ngwaọrụ na saịtị. Anyị nwere ike ịchọpụta ngwaọrụ gị iji nye gị ahụmịhe nkeonwe na mgbasa ozi n'ofe ngwaọrụ ị na-eji. Lee nke anyi Iwu kuki ngalaba maka ozi ndị ọzọ gbasara otu anyị nwere ike isi jiri teknụzụ ndị a wee kpokọta ozi a.
Nwere ike ịnweta atụmatụ nke saịtị site na mpaghara ndị ọzọ, forums, na saịtị mgbasa ozi, ọrụ, nkwụnye, na ngwa ('Social Media Sites'). Ntọala nzuzo gị na saịtị ndị dị otú ahụ na Social Media, yana iwu nzuzo ha, ga-ekpebi ozi nkeonwe na ozi ndị ọzọ nwere ike ịkekọrịta anyị, ma ọ bụ nweta anyị site na teknụzụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, mgbe ị banyere na saịtị, ma nwee ike anakọtara ma jiri ndị a Social Media saịtị. Ebe iwu kwere, site na ịnye Ozi a ma ọ bụ na-emekọrịta saịtị anyị site na saịtị Social Media, ị kwenyere ka anyị jiri Ozi site na Social Media Site dịka Iwu Nzuzo a.
Ozi Ọnọdụ. Anyị na-anakọta ozi oge gbasara ọnọdụ gị, dị ka obodo gị, mgbe ị nyere ya ma ọ bụ site na ozi ngwaọrụ (dị ka adreesị IP), ma ọ bụ ọnọdụ ngwaọrụ gị mgbe iji ekwentị mkpanaaka nweta saịtị ahụ.
Anyị na-eji Ozi anyị nakọtara gbasara gị ma ọ bụ nke ị nyere anyị maka ebumnuche akọwapụtara na iwu a ma ọ bụ gosipụta n'oge nnakọta ma ọ bụ jiri nkwenye gị, gụnyere maka ebumnuche ndị a:
Nye ma ọ bụ nyochaa ojiji nke saịtị na ọdịnaya ya, ngwaahịa, mmemme na ọrụ ya.
Mejupụta arịrịọ gị na ebumnuche ọ bụla ọzọ ị nyere ya, gụnyere ịgwa gị gbasara ihe ị zụtara ma ọ bụ azụmahịa gị.
Nye gị ọkwa banyere akaụntụ gị ma ọ bụ ndenye aha gị.
Ziga ozi gbasara nkwalite, onyinye, na atụmatụ saịtị.
Gwa gị mgbe ị meriri otu asọmpi anyị.
Gwa gị mgbe mmelite saịtị dị, yana mgbanwe maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla anyị na-enye ma ọ bụ nye ya n'agbanyeghị ya.
Nye, zụlite, lekọta, hazie onwe gị, chebe ma melite ahụmịhe gị na onyinye anyị na Saịtị.
Mee atụmatụ ndị na-ege anyị ntị na etu esi eji ya.
Chekwaa ozi gbasara mmasị gị, na-enye anyị ohere ịhazi saịtị anyị dị ka ọdịmma gị si dị.
Mee ngwa nyocha gị.
Chebe megide, mata, ma gbochie aghụghọ na omume ndị ọzọ akwadoghị
Mara gị mgbe ị na-eji saịtị.
Nye, ahia, ma kpọsaa ngwaahịa, mmemme, na ọrụ sitere n'aka anyị na ndị mmekọ anyị, ndị mmekọ azụmaahịa, ma họrọ ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị. Anyị nwekwara ike iji ozi anyị nakọtara gosipụta mgbasa ozi nye ndị na-ege anyị ozi.
Mezuo oru anyi ma mezuo ikike anyi sitere na nkwekorita obula abanye n’etiti gi na gi, gunyere igba ugwo na nchikota.
Chọpụta, nyochaa, ma gbochie ihe omume na saịtị anyị nke nwere ike imebi iwu anyị, nwere ike ịbụ aghụghọ, mebie ikike nwebisiinka, ma ọ bụ iwu ndị ọzọ ma ọ bụ nke nwere ike ịbụ n'ụzọ na-ezighi ezi, ime ihe iwu chọrọ, na iji kpuchido ikike anyị na ikike na nchekwa nke ndị ọrụ anyị na ndị ọzọ.
OT WE ANY WE NA-EKE EGO NA GOSI NKE Ozi Gị
Anyị nwere ike ịkekọrịta ma gosipụta mkpokọta na de-amata Ozi banyere ndị ọrụ anyị na-enweghị mmachi. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịkekọrịta ma gosipụta Ozi anyị na-anakọta, ma ọ bụ ịnye n'ụzọ ndị a ma ọ bụ maka ebumnuche ọ bụla ọzọ akọwapụtara n'oge nnakọta:
Na Nkwenye gị. Anyị nwere ike igosipụta Ozi gị mgbe ị nyere anyị nkwenye gị ịme ya.
Ndị Na-enye Ọrụ. Ndị ọrụ anyị, ndị na-enye ọrụ, ndị na-eweta ọdịnaya, yana ndị ọzọ ndị ọzọ anyị na-eji iji kwado azụmahịa anyị nwere ike ịnweta Ozi iji nyere aka rụọ ọrụ ha na-emere anyị, dịka, gụnyere: ịmepụta, ndozi, nnabata na ịnyefe Saịtị anyị, ngwaahịa na ọrụ anyị; na-eduzi ahia, na-ejikwa ịkwụ ụgwọ, email na mmezu iwu; inye asọmpi; na-eme nyocha na nyocha; na ọrụ ndị ahịa.
Ndibufa Obufa. Nye onye zụrụ ahịa ma ọ bụ onye ọzọ nọchiri ya na njikọta, mbibi, nhazigharị, ịhazigharị, mgbasa ma ọ bụ ire ndị ọzọ ma ọ bụ ịfefe ụfọdụ ma ọ bụ akụ anyị niile, ma ọ bụ dị ka nchegbu na-aga ma ọ bụ dịka akụkụ nke enweghị ego, mmezi mmiri ma ọ bụ usoro yiri ya, na nke ozi anyị nwere banyere saịtị anyị na ndị ọrụ so na akụ ndị ebufere.
esi gbanyụọ oji na ọcha na iphone
Saịtị Ejikọtara. Saịtị ahụ nwere ike ịnwe njikọ na saịtị ndị ọzọ, gụnyere saịtị Social Media. Anyị nwere ike iwekọta usoro mmemme nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụ nkwụnye ('Plug-ins') sitere na netwọkụ mmekọrịta, gụnyere Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest na ndị ọzọ, na saịtị anyị. Plug-ins nwere ike ịnyefe ozi gbasara gị na ntinye nke ntinye na-enweghị ihe ị mere. Ozi a nwere ike ịgụnye njirimara njirimara njirimara gị, ebe nrụọrụ weebụ ị nọ na ya, na ndị ọzọ. Mmekọrịta na Plug-in ga-ebufe ozi ozugbo na netwọkụ mmekọrịta Plug-in na ndị ọzọ nwere ike ịhụ ozi ahụ n'elu ikpo okwu ahụ. Ihe ntinye usoro na-achịkwa nkwụnye ins, ọ bụghị site na Iwu anyị.
Ndị mmekọ na ndị mmekọ. Anyị nwere ike igosipụta Ozi na ndị mmekọ, ndị mmekọ azụmaahịa, na ndị ọzọ (dịka, ndị na-ere ahịa, ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, netwọọdụ mgbasa ozi na nyiwe, ụlọ ọrụ nyocha, yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ) ndị amụma nzuzo a anaghị ekpuchi omume ha, nke ahụ nwere ike ịnye, na-enye, melite, ahịa, na ndị ọzọ ịgwa gị banyere ngwaahịa na ọrụ nke ha. Iji mụtakwuo banyere nhọrọ gị, biko lee Nhọrọ gị n'okpuru. Anyị nwekwara ike ịkekọrịta ụfọdụ Ozi na ndị ọzọ iji nye gị mgbasa ozi dabere na mmasị gị. Maka ozi ndị ọzọ, biko lee Nhọrọ Ad n'okpuru.
Haziri nzukọ na ngalaba-n'ọkwá. Mgbe ụfọdụ anyị na-enye ọdịnaya ma ọ bụ mmemme (dịka, asọmpi, ịsọ asọ, nkwalite, ma ọ bụ njikọta mmekọrịta Social Media) nke ndị ọzọ na-akwado ma ọ bụ na-emekọrịta ihe. Site na mmekọrịta ndị a, ndị ọzọ na-anakọta ma ọ bụ nweta Ozi n'aka gị mgbe ị sonyere na ọrụ ahụ. Anyị enweghị ikike ijikwa Ozi ndị a. Anyị na-agba gị ume ileba anya na nkwupụta nzuzo nke ụdị ndị ọzọ a iji mụta banyere omume data ha tupu ị sonye na ọrụ ahụ.
Ebumnuche Iwu na Iwu. Anyị nwere ike igosipụta Ozi na nzaghachi nye usoro iwu, dịka ọmụmaatụ na nzaghachi nye ikike ụlọ ikpe ma ọ bụ akwụkwọ ịkpọ akwụkwọ, ma ọ bụ nzaghachi maka arịrịọ ndị ọrụ mmanye iwu. Anyị nwekwara ike igosipụta Ozi dị otú ahụ na ndị ọzọ: (i) maka ebumnuche nke nchedo aghụghọ na mbelata ihe ize ndụ, (ii) ebe anyị kwenyere na ọ dị mkpa iji nyochaa, gbochie, ma ọ bụ mee ihe gbasara ihe ndị megidere iwu, (iii) iji mezuo iwu ikike anyị na-esite na nkwekọrịta ọ bụla abanye n'etiti gị na anyị, gụnyere Usoro Ojiji, Iwu a, na ịgba ụgwọ na nnakọta, (iv) ma ọ bụrụ na anyị kwenyere na ngosi dị mkpa ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị iji kpuchido ikike anyị, ihe onwunwe anyị, ma ọ bụ nchekwa anyị ma ọ bụ nke ahụ nke ndị ahịa anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ ngo ma ọ bụ ndị ọzọ, (v) dịka iwu chọrọ.
Nkwukọrịta ahịa ahịa na Shakesa ndị ọzọ. Nwere ike imelite mmasị gị n’ihe gbasara ịnweta nkwukọrịta ahịa sitere n’aka anyị, yana nkesa nke ozi nkeonwe anyị na ndị ọzọ. Nwere ike ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na nzuzo@planetlibre.org . I nwekwara ike pụọ na ịnweta nkwukọrịta ahịa email, site na isoro ntuziaka 'wepu aha' nke enyere na email ọ bụla ị nwetara n'aka anyị. Nwekwara ike ịgbanwe ọkwa ịkwanye na ekwentị mkpanaaka gị site na ngwaọrụ gị ma ọ bụ ntọala ngwa gị.
Nhọrọ Ad. Anyị nwere ike iso ndị ọzọ rụọ ọrụ iji gosipụta mgbasa ozi, ma tinye aka na nnakọta data, mkpesa, nchịkọta saịtị, nnyefe mgbasa ozi na nzaghachi nzaghachi na saịtị anyị yana weebụsaịtị na ngwa ndị ọzọ na oge. Ndị ọzọ a nwere ike iji kuki, mgbama weebụ, pikselụ, na teknụzụ ndị ọzọ yiri ya iji rụọ ọrụ a. Ha nwekwara ike inweta ozi gbasara ebe nrụọrụ weebụ ị gara, ngwa ị na-eji, na ozi ndị ọzọ site na ihe nchọgharị gị na ngwaọrụ iji gosipụta mgbasa ozi nwere ike ịhazi gị maka ọdịmma gị ma ọ bụ pụọ na saịtị anyị na n'ofe nyiwe ndị ọzọ. Isdị mgbasa ozi a maara dị ka mgbasa ozi nwere mmasị.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara mgbasa ozi dabere na mmasị na desktọpụ gị ma ọ bụ ihe nchọgharị ekwentị gị, yana ike ịpụ na ụdị mgbasa ozi nke ndị ọzọ, biko gaa na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi na / ma ọ bụ DAA Usoro nchịkwa nke onwe maka mgbasa ozi omume na ọnlaịnụ . Iji mụtakwuo maka mgbasa ozi dabere na mmasị na ngwa mkpanaaka yana otu esi apụ na ụdị mgbasa ozi nke ndị ọzọ, ị nwere ike ịga Ntinye . Biko rịba ama na nhọrọ ọpụpụ ọ bụla ị nwere ike ịme site na mmemme ndị a ga-emetụta naanị mgbasa ozi nwere mmasị site na ndị ọzọ ị họpụtara mana ha ka ga-enye ohere maka ịnakọta data maka ebumnuche ndị ọzọ, dị ka nchịkọta, nyocha, na arụmọrụ. Nwekwara ike ịga n'ihu na-enweta mgbasa ozi, mana mgbasa ozi ahụ nwere ike ịdị obere maka ọdịmma gị.
Ikike Nzuzo California. California Civil Code Nkebi nke 1798.83 na-enye ohere ka ndị ọrụ nke saịtị anyị bụ ndị bi na California rịọ ụfọdụ ozi gbasara ngosipụta nke ozi nkeonwe anyị na ndị ọzọ maka ebumnuche ahịa ha. Iji mee ụdị arịrịọ a, biko kpọtụrụ anyị na nzuzo@planetlibre.org .
Iwu COOKIE (N'èzí EU)
Kuki na Teknụzụ Ndị Ọzọ. Anyị, na ndị mmekọ anyị, ndị na-enye ọrụ ndị ọzọ, na ndị mmekọ azụmaahịa nwere ike izipu 'kuki' na kọmputa gị ma ọ bụ jiri teknụzụ yiri ya mee ka ahụmịhe ịntanetị gị dị na saịtị anyị yana site na mgbasa ozi na mgbasa ozi anyị na ntanetị na ngwa ekwentị.
Kuki bụ obere faịlụ ederede nwere ozi nke ebudatara na ngwaọrụ gị mgbe ị gara na weebụsaịtị, gụnyere saịtị anyị. Mgbe ahụ, a ga-eziga kuki na ngalaba weebụ nke mbụ na nleta gị na ngalaba ahụ. Imirikiti ibe weebụ nwere ihe dị iche iche sitere na ọtụtụ ngalaba weebụ yabụ mgbe ị gara na weebụsaịtị, ihe nchọgharị gị nwere ike ịnweta kuki site n'ọtụtụ ebe. Kuki bara uru n'ihi na ha na-enye ohere ka webusaiti mata ngwaọrụ nke onye ọrụ. Kuki na-enye gị ohere ịnyagharịa weebụsaịtị nke ọma, cheta mmasị na izugbe ahụmịhe onye ọrụ. Enwere ike iji ha dozie mgbasa ozi maka ọdịmma gị site na ị na-enyocha nchọgharị gị na ebe nrụọrụ weebụ. A na-ehichapụ kuki ndị ọrụ na akpaghị aka mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị na kuki ndị na-adịgide adịgide na-adịgide na ngwaọrụ gị mgbe emechiri ihe nchọgharị ahụ (dịka icheta mmasị ndị ọrụ gị mgbe ị laghachiri na saịtị ahụ).
Anyị nwekwara ike iji pikselụ ma ọ bụ 'mgbama weebụ' nke na-eleba anya n'iji saịtị anyị. Mgbama Weebụ bụ obere faịlụ eletrọnik jikọtara na saịtị ma ọ bụ nkwukọrịta anyị (dịka ozi ịntanetị) nke na-enye anyị ohere, dịka ọmụmaatụ, ịgụta ndị ọrụ gara na ibe ndị ahụ ma ọ bụ mepee email ma ọ bụ maka ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ metụtara ya. Anyị nwekwara ike iwebata 'Development Development Kit' ('SDKs') n'ime ngwa anyị iji rụọ ọrụ yiri ya dị ka kuki na mgbama weebụ. Dịka ọmụmaatụ, SDKs nwere ike ịnakọta ozi teknụzụ na ojiji dịka njirimara ngwaọrụ ngwaọrụ mkpanaaka yana mmekọrịta gị na saịtị na ngwa ndị ọzọ eji egwu egwu.
Anyị nwere ike iji kuki na teknụzụ ndị ọzọ iji nyere aka ịmata ihe nchọgharị gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị, jigide mmasị gị, nye ụfọdụ atụmatụ saịtị, ma nakọta Ozi gbasara mmekọrịta anyị na saịtị anyị, ọdịnaya anyị na nkwukọrịta anyị.
Anyị nwekwara ike iji kuki na teknụzụ ndị ọzọ (i) iji nye, zụlite, chekwaa, hazie, chebe, ma melite Saịtị anyị, ngwaahịa, mmemme na ọrụ anyị yana iji rụọ ọrụ anyị, (ii) iji mee nyocha, gụnyere iji nyochaa na mkpesa banyere ojiji na arụmọrụ nke saịtị na ahịa anyị, (iii) iji kpuchido, mata, ma gbochie aghụghọ na ọrụ ndị ọzọ na-akwadoghị, (iv) iji mepụta mkpokọta data gbasara otu ma ọ bụ otu ndị ọrụ anyị, (v) iji mekọrịta ndị ọrụ gafee ngwaọrụ, ndị mmekọ, ndị mmekọ azụmaahịa, ma họrọ ndị ọzọ, yana (vi) maka anyị na ndị mmekọ anyị, ndị mmekọ azụmaahịa, ma họta ndị ọzọ iji lekwasị, inye, ma ọ bụ ahịa, ngwaahịa, mmemme, ma ọ bụ ọrụ. Kuki na teknụzụ ndị ọzọ na-akwado ma tụọ arụmọrụ nke mgbasa ozi gosipụtara ma ọ bụ nyefee site na anyị ma ọ bụ site n'aka anyị na / ma ọ bụ netwọk ndị ọzọ ma ọ bụ saịtị. Site na ịga na saịtị ahụ, ma ọ bụ dị ka onye edebanyere aha ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ị kwenyere, ma kwenye na ị na-enye anyị nkwenye gị iji nyochaa ọrụ gị yana ojiji nke saịtị site na teknụzụ ndị akọwapụtara n'elu, yana teknụzụ yiri ya mepụtara n'ọdịnihu , na anyị nwere ike iji teknụzụ nsuso dị otú ahụ na ozi ịntanetị anyị zitere gị.
Nwere ike ịgbanwe ihe nchọgharị gị iji jụ kuki. Cookieschịkwa kuki site na njikwa ihe nchọgharị nwere ike ọ gaghị amachi ojiji anyị na teknụzụ ndị ọzọ. Biko gụọ ntọala nchọgharị gị maka ozi ndị ọzọ. Agbanyeghị, igbochi kuki ma ọ bụ teknụzụ yiri ya nwere ike igbochi gị ịnweta ụfọdụ ọdịnaya ma ọ bụ atụmatụ anyị na saịtị. Ugbu a, anyị anaghị azaghachi akara Esona Sistem n'ihi na enwebebeghị ụdị teknụzụ edo edo. Anyị na-aga n'ihu inyocha teknụzụ ọhụụ ma nwee ike ịnwe ụkpụrụ mgbe emepụtara otu.
Ijikwa kuki na teknụzụ ndị ọzọ
Kuki dị ezigbo mkpa
Kuki ndị a dị mkpa iji nyere gị aka ịgagharị na saịtị ma jiri atụmatụ ya. Na-enweghị kuki ndị a, a gaghị enye ọrụ ị rịọrọ (dị ka ịgagharị n'etiti peeji). Ndepụta ndị a na-esetịpụrụ ụfọdụ ụdị kuki ndị a:
Ebe Kuki: planetlibre.es
Anyị na-eji data echekwara na kuki a maka nchịkwa usoro, iji melite nchebe, ma nye ohere ịnweta ọrụ achọrọ na saịtị ahụ
Ozi ndị ọzọ: kuki oge (na-agwụ mgbe ihe nchọgharị mechiri)
Anyị na-eji kuki nyocha iji nyochaa otu ndị ọbịa anyị si eji saịtị ahụ ma nyochaa arụmọrụ ha. Nke a na-enye anyị ohere ịnye ahụmịhe dị elu site na ịhazi onyinye anyị na ịchọpụta na idozi nsogbu ọ bụla bilitere. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike iji kuki arụmọrụ iji soro nke ibe ndị kachasị ewu ewu, usoro nke ijikọ n'etiti peeji kachasị dị irè, yana iji chọpụta ihe kpatara ụfọdụ peeji ji enweta ozi ezighi ezi. Anyị nwekwara ike iji kuki ndị a iji gosipụta isiokwu ma ọ bụ ọrụ saịtị anyị chere na ọ ga-amasị gị dabere na ojiji nke saịtị. Ozi nke kuki ndị a anakọtara na ozi nkeonwe gị nke anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-ejikwa naanị na mkpokọta na de-mata ụdị. Ndepụta ndị a na-esetịpụrụ ụfọdụ ụdị kuki ndị a:
Isi kuki: Nchịkọta Google
A na-eji kuki ndị a ịnakọta ozi banyere otu ndị ọbịa si eji saịtị anyị. Anyị na-eji ihe ọmụma ahụ iji chịkọta akụkọ ma nyere anyị aka imeziwanye saịtị anyị. Kuki ahụ na-anakọta ozi n'ụdị na-enweghị aha, gụnyere ọnụọgụ nke ndị ọbịa na saịtị ahụ, ebe ndị ọbịa bịara na saịtị ahụ na ibe ha gara.
Pịa ebe a maka iwu nzuzo nke Google maka nkwupụta Google: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Nwere ike ịpụ na nyocha site na nchịkọta Google site na ịga na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Kuki na-adịgide adịgide.
Ebe e si nweta kuki: Mouseflow
Anyị na-eji Mouseflow weghara ozi njirimara onye anọrọ na nzuzo ka ndị ọbịa na saịtị ahụ si emekọrịta ihe na ibe. Anyị na-eji data a na-amaghị aha iji nyefee nzaghachi maka ahụmịhe saịtị dị mma maka ndị ọrụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụ, ị nwere ike ịme ya na https://mouseflow.com/opt-out.
Anyị na-eji kuki iji nye gị ụfọdụ ọrụ. Iji maa atụ, ilele ọdịnaya vidiyo, iyi ndị dị ndụ, ma ọ bụ icheta nhọrọ ị mere na iji nye atụmatụ ndị ka mma na ndị ọzọ. A naghị eji kuki ndị a iji nyochaa nchọgharị gị na saịtị ndị ọzọ. Ndepụta ndị a na-esetịpụrụ ụfọdụ ụdị kuki ndị a:
Ebe e si nweta kuki: Google Ajax Search
Kuki a na-enye ụdị atụmatụ typehead dị na Ogwe gafee Saịtị. Nke a na-enye aro mkpụrụokwu ntụ ntụ ma na-enye aka nụchaa ajụjụ ọchụchọ.
Kuki oge (ga-agwụ mgbe ihe nchọgharị mechiri)
Kuki na-akpọsa (ma ọ bụ na-elekwasị anya na kuki) na-anakọta ozi gbasara omume nchọgharị metụtara na ngwaọrụ gị ma ejiri ya iji mee ka mgbasa ozi dị gị mkpa na ọdịmma gị. Kuki ndị a na-atụle ịdị irè nke mkpọsa mgbasa ozi ma chọpụta ma egosipụtala mgbasa ozi nke ọma. Ndepụta ndị a na-esetịpụrụ ụfọdụ ụdị kuki ndị a:
Ebe Kuki: DoubleClick
DoubleClick na-eji kuki iji melite mgbasa ozi. Applicationsfọdụ ngwa a na-ahụkarị bụ ịkwado mgbasa ozi dabere na ihe dị mkpa nye onye ọrụ, iji melite mkpesa na arụmọrụ mkpọsa, yana iji zere igosi mgbasa ozi onye ọrụ ahụgoro.
Pịa ebe a maka iwu nzuzo Google maka DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
Nwere ike ịpụ na nsochi site DoubleClick site na ịga na https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Ebe Kuki: Facebook Pixel
Anyị na-eji pikselụ Facebook dị ka ụzọ isi ghọta ndị ọrụ anyị nke ọma, iji hazie ọdịnaya na mgbasa ozi, iji nye usoro mgbasa ozi mmekọrịta na nyochaa okporo ụzọ na saịtị ahụ. Ihe anakọtara na-anọgide na-enweghị aha. Nke a pụtara na anyị enweghị ike ịhụ data nkeonwe onye ọrụ ọ bụla. Agbanyeghị, Facebook na-echekwa data ndị anakọtara ma hazie.
Facebook nwere ike ijikọ data na akaụntụ Facebook gị ma jiri data maka ebumnuche mgbasa ozi nke ha, dịka iwu nzuzo ha dị n'okpuru: https://www.facebook.com/about/privacy/
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụ, ị nwere ike ịme ya na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Enwere ike iji kuki mgbasa ozi site na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta sitere na saịtị anyị, dị ka bọtịnụ 'Share' ma ọ bụ ihe ọdịyo / vidiyo na-agbakwunye. Kuki ndị a na-enyekwa ọrụ achọrọ. Ndị dị otú ahụ na-elekọta mmadụ media saịtị tinye ala mgbasa ozi ma mgbe ị gara na saịtị anyị na mgbe ị na-eji ọrụ ha na ịnyagharịa pụọ ​​na saịtị anyị. A na-akọwapụta kuki nke ụfọdụ saịtị mgbasa ozi mmekọrịta n'okpuru:
Iwu kuki nke Facebook
Iwu kuki nke Twitter
Iwu kuki nke Instagram
Iwu kuki nke Pinterest
Iwu kuki nke YouTube
Iwu kuki SoundCloud
Iwu Kuki Google Plus
Nweta, ndozi na ihichapụ ozi gị
Jụ maka ozi nkeonwe anyị kpokọtara gbasara gị na ịntanetị site na saịtị nke edepụtara Nzuzo Nzuzo a ma ọ bụ iji dozie ozi nkeonwe dị otú ahụ, ị ​​nwere ike zitere anyị email nzuzo@planetlibre.org . Nwere ike ịrịọ ma nweta mwepụ nke onyinye Onye ọrụ gị site na emailing nzuzo@planetlibre.org na arịrịọ gị na ịkọwapụta Onyinye Ọrụ Onye Ọrụ ịchọrọ ịwepụ. Anyị nwere ike ghara ịnabata arịrịọ ịgbanwe ma ọ bụ hichapụ ozi ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị kwenyere na omume dị otú ahụ ga-emebi iwu ọ bụla ma ọ bụ iwu chọrọ ma ọ bụ mee ka ozi ahụ ghara ịdị na-ezighi ezi. Mwepụ nke Onyinye Ndị Ọrụ Gị na saịtị anaghị eme ka mwepụta zuru ezu ma ọ bụ nke zuru oke nke ụdị Ntinye Onye Ọrụ site na Saịtị dị ka nnomi nwere ike ịdịrịrịrịrịrịrị ihu na nchekwa na ibe edokọbara ma ọ bụ enwere ike depụtaghachi ma ọ bụ chekwaa ndị ọrụ saịtị ndị ọzọ. Nwere ike wepu aha na akwụkwọ akụkọ ọ bụla ma ọ bụ ozi ịntanetị nkwalite dị iche iche n'oge ọ bụla site na ịpị njikọ 'wepu aha' nke enyere na nkwukọrịta dị otú ahụ. May nwere ike ịpụ na nkwukọrịta metụtara saịtị, dị ka nkwenye akaụntụ, ịzụta nkwenye na ozi nhazi, ọ bụrụhaala na ị debanyere aha na saịtị ahụ.
Ihazi ihe ọmụma gị
A na-akwado saịtị ahụ na United States. Anyị nwere ike ịkwụsị nnweta saịtị ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla akọwapụtara na saịtị ahụ na mmadụ ọ bụla ma ọ bụ mpaghara ala n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ịbanye n'outsidentanet site na mpụga United States, ị na-eme nke a n'ihe egwu gị.
Anyị emejuputa usoro oru na nhazi kwesịrị ekwesị maka nchekwa nke saịtị. O di nwute, nnyefe ozi site na ntaneti na ntaneti ekwenti adighi nchebe. N’agbanyeghi na anyị n’eji nchekwa dị mma iji kpuchido ozi nkeonwe gị, anyị enweghị ike ịkwado nchebe nke ozi nkeonwe gị. Transmissionnyefe ozi nkeonwe gị n’ thentanet nọ n’ihe ize ndụ gị. Anyị anaghị ahụ maka ịmegharị ntọala nzuzo ọ bụla ma ọ bụ usoro nchekwa anyị nyere. Nchedo na nchekwa nke ozi gị dabere na gị. Ebe anyị nyere gị (ma ọ bụ ebe ị họọrọ) paswọọdụ maka ịnweta akụkụ ụfọdụ nke Saịtị anyị, ị ga-ahụ maka idebe paswọọdụ a. Ikwesighi ikesa okwuntughe gi na onye obula.
Mgbanwe NA iwu anyị
Anyị nwere ike imelite Iwu anyị site n’oge ruo n’oge. Anyị ga-agwa gị maka mgbanwe ọ bụla gbasara amụma nzuzo a site na itinye ọkwa na saịtị anyị. Anyị na-agba gị ume ka ị na-elele anya site n'oge ruo n'oge ma nyochaa Iwu a ka ị wee mara mgbanwe ọ bụla adịbeghị anya.
OT TO Kpọtụrụ anyị
Nchegbu Nzuzo. Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ọ bụla ma ọ bụ mkpesa banyere nzuzo na saịtị, biko kpọtụrụ anyị na planetlibre Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA ma ọ bụ zitere anyị email na nzuzo@planetlibre.org . Anyị ga-eme ike anyị niile iji zaghachi gị n'oge na ọrụ ọkachamara iji zaa ajụjụ gị ma dozie nsogbu gị. Und planetlibre Digital Media, LLC. Ikike niile echekwabara. Purpleclover na Purpleclover.com bụ ụghalaahịa nke planetlibre Digital Media, LLC
Emelitere ikpeazụ: Jenụwarị 1, 2020
Ihe ngosi nzuzo a maka ndị bi na CIFIFORNIA gbakwunyere ozi dị na Nzuzo Nzuzo a ma na-emetụta ndị ọbịa, ndị ọrụ na ndị ọzọ bi na steeti California ('ndị ahịa' ma ọ bụ 'gị') ma na-enyekwa ozi gbasara ikike ndị ahịa n'okpuru Iwu nzuzo nzuzo ndị ahịa California nke 2018 ('CCPA') na ụfọdụ iwu nzuzo California ndị ọzọ. Usoro ọ bụla akọwapụtara na CCPA nwere otu ihe aha ahụ mgbe ejiri ya na ọkwa a.
Ozi mmadu nke anyi choro
Anyị na-anakọta ozi nke na-egosipụta, metụtara, kọwaa, amaokwu, enwere ike ịmekọrịta, ma ọ bụ nwee ike jikọta ya, ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi, na otu ndị ahịa ma ọ bụ ngwaọrụ ('ozi nkeonwe'). Karịsịa, anyị anakọtara edemede ndị a gbasara ozi gbasara ndị ahịa n'ime ọnwa iri na abụọ (12) gara aga:
Ntanetị ma ọ bụ ọrụ ntanetị yiri ya (dị ka akụkọ nchọgharị)
Nhazi ala (dị ka kpọmkwem ọnọdụ nke ngwaọrụ gị)
Ozi nkeonwe anaghị agụnye:
Ihe omuma nke ohaneze sitere na ndekọ ochichi.
De-amata ma ọ bụ ozi nchịkọta ozi nke ndị ahịa.
Ozi ewepu na CCPA, dika:
ahụike ma ọ bụ ozi ahụike nke Health Insurance Portability and Accountability Act nke 1996 (HIPAA) na California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) ma ọ bụ data ikpe ahụike;
ozi nkeonwe nke iwu nzuzo ụfọdụ akọwapụtara na ngalaba, gụnyere Fair Credit Reporting Act (FRCA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) ma ọ bụ California Information Information Privacy Act (FIPA), yana Iwu Nchedo Ọkwọ ụgbọala nke 1994.
Anyị nwere ike ịnakọta ụfọdụ ozi teknụzụ na ojiji mgbe ị na-eji Saịtị anyị ma ọ bụ na-emekọrịta na mgbasa ozi na ọdịnaya anyị n'ịntanetị, dị ka ụdị ngwaọrụ, ihe nchọgharị, na sistemụ arụmọrụ ị na-eji, njirimara ngwaọrụ pụrụ iche, adreesị IP, ngwaọrụ na ntọala ihe nchọgharị. , webpages ndị ị gara, ozi gbasara otu ị si emekọrịta na saịtị anyị na nke ndị mmekọ anyị na ndị ọzọ (dịka ibe ndị ị gara), yana ozi na-enye anyị ohere ịmata ma jikọta ọrụ gị n'ofe ngwaọrụ na weebụsaịtị. Anyị nwere ike ịchọpụta ngwaọrụ gị iji nye gị ahụmịhe nkeonwe na mgbasa ozi n'ofe ngwaọrụ ị na-eji.
Biko mara na ụlọ ọrụ ụfọdụ na-etinye teknụzụ nsuso dị ka kuki na saịtị anyị nke na-enye ụlọ ọrụ ndị ahụ ohere ịnata ozi gbasara ọrụ gị na saịtị anyị nke metụtara ihe nchọgharị gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị. Lee nke anyi Iwu kuki (n'èzí EU) n'elu maka ozi ndị ọzọ gbasara nsuso na Saịtị anyị na otu anyị nwere ike isi jiri teknụzụ ndị a wee kpokọta ozi a. Companieslọ ọrụ ndị a nwere ike iji data ahụ hazie ọdịnaya maka gị yana iji jeere gị ozi dị mkpa karịa na saịtị anyị ma ọ bụ ndị ọzọ, na nnọchite anyị na n'aha ndị mgbasa ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-arịọ arịrịọ, na ị ga-achọ ịpụ na nsuso nke kuki maka ebumnuche mgbasa ozi, biko rịba ama na ị ga-achọ iche iche ntọala ihe nchọgharị gị ma setịpụ mmasị gị dị ka akọwara na anyị Iwu kuki (na mpụga EU) n'elu.
Nwere ike ịnweta atụmatụ nke saịtị site na obodo, forums, na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ, ọrụ, nkwụnye, na ngwa nke ndị na-eweta mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ('Social Media Sites'). Ntọala nzuzo gị na saịtị ndị dị otú ahụ na Social Media, yana iwu nzuzo ha, ga-ekpebi ozi nkeonwe na ozi ndị ọzọ nwere ike ịkekọrịta anyị, ma ọ bụ nweta anyị, site na teknụzụ mgbasa ozi mgbasa ozi mgbe ị banyere na saịtị, ma nwee ike anakọtara ma jiri ndị a Social Media saịtị. Ebe iwu kwadoro, site na ịnye Ozi a ma ọ bụ na-akpakọrịta na Saịtị anyị site na saịtị Social Media, ị kwenyere ka anyị jiri Ozi site na Social Media Site dịka Iwu Nzuzo a.
Ozi Ọnọdụ. Anyị na-anakọta ozi gbasara ebe izugbe gị, dị ka obodo gị ma ọ bụ adreesị IP gị. Anyị na-anakọta kpọmkwem ọnọdụ nke ngwaọrụ gị mgbe ị jiri saịtị mkpanaka gị nweta saịtị ahụ. Ọ bụghị ozi a niile ka ejigidere, ọ bụghịkwa ozi a niile nwere njikọ gị.
Otu anyi si eji ozi mmadu
Anyị na-eji ozi nkeonwe maka ebumnuche akọwapụtara na iwu a ma ọ bụ gosipụta n'oge nnakọta ma ọ bụ na nkwenye gị, gụnyere maka ebumnuche ndị a:
Nye, ahia, ma kpọsaa ngwaahịa, mmemme, na ọrụ sitere n'aka anyị na ndị mmekọ anyị, na ndị mmekọ azụmahịa nwere ike ịmasị gị. Anyị nwekwara ike iji ozi anyị nakọtara gosipụta mgbasa ozi nye ndị na-ege anyị ozi.
Nyochaa njirimara gị n'ihe metụtara arịrịọ CCPA emere ebe a.
IHE NA-EME IHE NA-AKPATA AKW PKWỌ NDERS
Anyị na-anakọta ozi nkeonwe na ngwaọrụ gị na akpaghị aka. Anyị na-eji ngwaọrụ nsuso ịnakọta ozi mgbe ị na-eji ma ọ bụ na-emekọrịta na saịtị, mgbasa ozi anyị na ọdịnaya ịntanetị, na ozi ịntanetị anyị.
Anyị nwere ike ịnakọta ozi nkeonwe site na ọdụ data dị n'ihu ọha.
Anyị na-enweta ozi nkeonwe n’aka ndị na-ebunye anyị ọrụ anyị ga-arụrụ anyị ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-ere ahịa na-akwado ma ọ bụ na-echekwa weebụsaịtị anyị ma zigara anyị ozi-e nkwado ka anyị nwee ike ịnye anyị ozi.
Anyị nwere ike ịnweta ozi nkeonwe site na ndị ọzọ, dị ka mgbe ndị mmekọ na-azụ ahịa ahịa ma ọ bụ netwọkụ mgbasa ozi na-akọrọ anyị ozi. Anyị nwekwara ike ịnweta ozi sitere na saịtị Social Media, dị ka akọwara n'elu.
kedu ka m ga -esi megharia ihuenyo ipad m
OT WE ANY WE NA-EKE EGO NA GOSI EGO N'onwe Gị
Anyị nwere ike igosipụta ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ maka ebumnuche azụmaahịa anyị. N'ime ọnwa iri na abụọ gara aga, anyị egosipụtala ụdị ozi nkeonwe anyị maka ebumnuche azụmaahịa anyị:
Ntanetị ma ọ bụ ọrụ ntanetị ndị ọzọ yiri ya (dị ka akụkọ nchọgharị)
Anyị nwere ike igosipụta ụdị nke ozi nkeonwe dị n'elu maka ebumnuche azụmaahịa anyị na ngalaba ndị ọzọ:
Ndị mmekọ anyị.
Ndị na-enye ọrụ.
Ndị ọzọ nke gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị nyere anyị ikike igosipụta ozi nkeonwe gị gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị nyere gị.
N'ime ọnwa iri na abụọ gara aga (12), anyị erebeghị ozi nkeonwe ọ bụla dịka nghọta anyị banyere CCPA. Companylọ ọrụ ahụ agaghị erere ozi nkeonwe gị n'ọdịnihu, dị ka nghọta anyị banyere CCPA si dị, na-enweghị inye gị ọkwa ma nye gị ohere ịpụ n'oge ahụ.
Ikike gị na nhọrọ gị
CCPA na-enye ndị na-azụ ahịa (ndị bi na California) ikike ụfọdụ gbasara ozi nkeonwe ha. Akụkụ a na-akọwa ikike CCPA gị ma kọwaa otu esi eji ikike ndị ahụ.
Tonweta Ozi Pụrụ Iche na ikike Ikike Data
Have nwere ikike ịrịọ ka anyị gosipụta gị ụfọdụ ozi gbasara mkpokọta anyị na ojiji nke ozi gbasara gị na ọnwa 12 gara aga. Ozugbo anyị natara ma gosipụta arịrịọ ndị ahịa gị, anyị ga-ekpughere gị ụfọdụ ma ọ bụ ihe ndị a niile dabere na arịrịọ gị:
Akụkụ ụfọdụ nke ozi nkeonwe anyị chịkọtara gbasara gị (nke a na-akpọkwa arịrịọ ikike data).
Dị ozi nkeonwe anyị chịkọtara gbasara gị.
Otu edemede nke ozi nkeonwe anyị gbakọtara gbasara gị.
Azụmaahịa anyị ma ọ bụ nzube azụmahịa maka ịnakọta ma ọ bụ ire ozi nkeonwe ahụ.
Udi nke ndi ozo ndi anyi na ha kesara ozi nkeonwe.
Ọ bụrụ na anyị rere ma ọ bụ gosipụta ozi nkeonwe gị maka ebumnuche azụmahịa, ndepụta abụọ dị iche iche na-ekpughe:
Ahịa, ịmata ngalaba edemede nke onye ọ bụla zụtara; na
nkwuputa maka ebumnuche azụmaahịa, na-akọwapụta ngalaba ozi nkeonwe nke ụdị onye natara ọ bụla.
Ikike nhichapụ ikike
I nwere ikike ịrịọ ka anyị hichapụ ozi nkeonwe gị ọ bụla anyị nakọtara n'aka gị ma jigide anyị, agbanyeghị ụfọdụ ndị ọzọ. Ozugbo anyị natara ma gosipụta arịrịọ ndị ahịa gị, anyị ga-ehichapụ (ma duzie ndị na-ahụ maka ọrụ anyị ka ha hichapụ) ozi nkeonwe gị site na ndekọ anyị, belụsọ na mwepu na-adịghị.
Ime Nweta, Enweta data, na Ihichapụ ikike
Iji gosipụta ohere, ikike data, na nhichapụ ikike ndị akọwara n'elu, biko nyefee anyị ndị ahịa arịrịọ site na ma:
Na-akpọ anyị na: 1-866-522-5025
Na-ezitere anyị ozi na: nzuzo@planetlibre.org
Naanị gị ma ọ bụ onye ị nyere ikike ime ihe n'aha gị, nwere ike ịrịọ ndị na-azụ ahịa arịrịọ metụtara ozi nkeonwe gị.
Nwere ike ịrịọ naanị onye na-azụ maka arịrịọ maka ịnweta ma ọ bụ nweta data data ugboro abụọ n'ime oge ọnwa 12. Ahịa arịrịọ ga:
Nye adreesị ozi-e dị irè, akara ekwentị, adreesị ma ọ bụ ozi ndị ọzọ zuru oke nke na-enye anyị ohere iji nyochaa na ị bụ onye anyị zukọtara ozi nkeonwe ma ọ bụ onye nnọchi anya gị.
Kọwaa arịrịọ gị na nkọwa zuru oke nke na-enye anyị ohere ịghọta nke ọma, nyochaa, na ịza ya.
Anyị enweghị ike ịza arịrịọ gị ma ọ bụ nye gị ozi nkeonwe ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọpụta njirimara gị ma ọ bụ ikike nke onye nnọchi anya gị ịrịọ arịrịọ ma gosipụta ozi nkeonwe metụtara gị. Ime arịrịọ ndị ahịa anaghị achọ ka gị na anyị nwee akaụntụ. Anyị ga-eji ozi nkeonwe enyere na arịrịọ ndị ahịa iji nyochaa njirimara nke onye rịọrọ ma ọ bụ ikike iji rịọ arịrịọ ahụ.
Oge nzaghachi na usoro
Anyị na-agba mbọ ịzaghachi arịrịọ ndị ahịa na-ekwe nkwa n’ime ụbọchị iri anọ na ise nke nnata ya. Ọ bụrụ na anyị chọrọ oge (ruo ụbọchị 90), anyị ga-agwa gị ihe kpatara ya na oge ndọtị na ederede. Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na anyị, anyị ga-ewepụta azịza ederede anyị na akaụntụ ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ na anyị, anyị ga-eweta nzaghachi ederede anyị site na ozi ma ọ bụ site na kọmputa, na nhọrọ gị. Ihe ngosi ọ bụla anyị nyere ga-ekpuchi naanị ọnwa 12 tupu nnata nke arịrịọ ahụ. Nzaghachi anyị nyere ga-akọwakwa ihe kpatara na anyị enweghị ike irubere arịrịọ, ọ bụrụ na ọdabara. Maka arịrịọ maka ikike data, anyị ga-ahọrọ usoro iji nye ozi nkeonwe gị nke nwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma ma kwe ka ị nyefee ozi ahụ site na otu ụlọ ọrụ gaa na ihe ọzọ na enweghị mgbochi.
Mgbanwe na Amụma Nzuzo Anyị
Anyị nwere ikike ịgbanwe ihe ndị a anyị kwuru gbasara ihe anyị chọrọ na n’oge ọ bụla. Mgbe anyị mere mgbanwe na ọkwa nzuzo a, anyị ga-agwa gị site na ọkwa na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ọ bụla ma ọ bụ mkpesa banyere nzuzo na saịtị, ụzọ anyị si anakọta ma jiri ozi nkeonwe gị, nhọrọ gị na ikike gị banyere iji ya, ma ọ bụ chọọ ịme ikike gị n'okpuru iwu California, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị na planetlibre Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, USA, zitere anyị email na nzuzo@planetlibre.org ma ọ bụ kpọọ na 1-866-522-5025.
Iwu nzuzo maka ndị ọrụ EU
planetlibre Digital Media, LLC d / b / a planetlibre Industries, ndị mmekọ ya na ndị enyemaka ('planetlibre', 'we', 'us', ma ọ bụ 'anyị') ji nzuzo nke ndị ọrụ na ndị debanyere aha anyị kpọrọ ihe. Anyị na-agbasi mbọ ike ịkọwapụta otu anyị si anakọta ma jiri Ozi gị (dị ka akọwara n'okpuru), iji mee ka ozi gị dị nchebe ma nye gị nhọrọ ndị bara uru. Amụma nzuzo a ('Iwu') na-akọwa omume nzuzo maka www.planetlibre.es weebụsaịtị ('Saịtị'), nke nwere, ma rụọ ya, n'ozuzu ma ọ bụ na akụkụ, site planetlibre. Iwu a na-akọwa etu planetlibre si achịkọta, jiri ya ma gosipụta Ozi gị dịka onye njikwa data.
Iwu a metụtara ọrụ ozi anyị n'ịntanetị maka saịtị ahụ maka ndị ọrụ n'ime European Union. Iwu a anaghị emetụta data nkeonwe anakọtara site na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa ọ bụla nke atọ, gụnyere weebụsaịtị ị nwere ike ịnweta site na saịtị. Weebụsaịtị ndị ahụ na ngwa nwere ike ịnwe iwu nzuzo nke ha, nke anyị na-agba gị ume ka ị gụọ tupu ịnye ozi nkeonwe ọ bụla na ma ọ bụ site na ha.
Biko gụọ Iwu a nke ọma iji ghọta ụkpụrụ na omume anyị gbasara Ozi gị yana otu anyị ga-esi mesoo ya. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na iwu na omume anyị, anaghị eji saịtị ahụ. Site na iji saịtị, ị kwenyere na Iwu a. Iwu a nwere ike igbanwe site n’oge ruo n’oge. A nọgidere na-eji saịtị gị eme ihe mgbe anyị mechara mgbanwe iji bụrụ nnabata mgbanwe ndị ahụ, biko biko tụlee Iwu maka oge maka mmelite.
A na-akwado saịtị anyị na United States. Nke a pụtara na anyị ga-edozi Ozi anyị nakọtara na United States, mba nwere ụkpụrụ nchekwa nchekwa dị ala karịa European Union. Otú ọ dị, ka anyị na-enye ndị bi na European Union na ọrụ anyị, planetlibre dịkwa n'okpuru iwu nchekwa data Europe, ọkachasị EU General Data Regulation (GDPR).
planetlibre nọ na nhọpụta onye nnọchi anya EU ga-eme ka ị mata site na mmelite emelitere nke Iwu a ozugbo a họpụtara onye nnọchi anya EU.
Anyị na-eji ngwa ndị yiri nke nkwekọrịta nkwekọrịta ọkọlọtọ kwekọrọ na GDPR mgbe ị na-ebufe<
Ozi gị na mpụga nke European Union ma ọ bụ ndị ọzọ. Anyị nwekwara ike ịkwụsị nnweta saịtị ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa akọwapụtara na saịtị na onye ọ bụla ma ọ bụ mpaghara ala n'oge ọ bụla.
M UAKA N’AFỌ 16
Ebughị saịtị ahụ maka ụmụaka n'okpuru afọ 16, anyị anaghị akpachara anya na-anakọta ozi nkeonwe n'aka ụmụaka n'okpuru afọ 16. Ọ bụrụ na anyị amụta na anyị anakọtara ma ọ bụ nata ozi nkeonwe n'aka nwatakịrị nọ n'okpuru 16 na-enweghị nkwenye nke nkwenye ndị nne na nna, anyị ga-ehichapụ ozi ahụ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na anyị nwere ozi ọ bụla sitere na ma ọ bụ banyere nwatakịrị na-erubeghị afọ 16, biko kpọtụrụ anyị na nzuzo@planetlibre.org
Anyị nwere ike ịnakọta ma jikọta ụdị ozi dị iche iche ọnụ, ma na-ezo aka na ozi niile a na Nzuzo Nzuzo dịka 'Ozi'. N'okpuru ebe a bụ ụdị ozi anyị nwere ike ịnakọta:
Ozi Prov Nye Anyị. Anyị nwere ike ịnakọta Ozi ị nyere anyị, dị ka:
mgbe ị debanyere aha ma ọ bụ jiri saịtị ahụ, ma ọ bụ denye aha na ọrụ ọ bụla na saịtị ahụ, anyị nwere ike ịjụ gị ka ịnye ozi nkeonwe nke a ga-eji mata gị, dị ka aha, adreesị nzipu ozi, adreesị ozi-e, akara ekwentị, ma ọ bụ ihe ọ bụla nkọwa kọntaktị ndị ọzọ.
anyị nwere ike ịjụ gị ka ịnye Ozi gị mgbe ị banyere asọmpi ma ọ bụ asọmpi a na-akwado anyị ma ọ bụ zaghachi nyocha nke anyị nwere ike biputere ma jụọ iji mezue na saịtị.
mgbe ị na-agwa anyị okwu iji kọọ akụkọ banyere saịtị, ma ọ bụ mee ajụjụ ọ bụla ọzọ. Anyị nwere ike ịdekọ ndekọ na akwụkwọ ozi nke ozi gị (gụnyere adreesị ozi-e, akara ekwentị, na ozi onwe onye ọ bụla ọzọ ị nyere).
Anyị nwere ike ịnakọta ụfọdụ ozi teknụzụ na ojiji mgbe ị na-eji Saịtị anyị, dị ka ụdị ngwaọrụ, ihe nchọgharị, na sistemụ arụmọrụ ị na-eji, njirimara ngwaọrụ pụrụ iche, adreesị IP, ngwaọrụ na ntọala ihe nchọgharị, ibe weebụ ị gara, gụnyere ozi gbasara otu ị si emekọrịta na Saịtị anyị na nke ndị mmekọ anyị na ndị ọzọ na ozi na-enye anyị ohere ịmata ma jikọta ọrụ gị n'ofe ngwaọrụ na saịtị. Anyị nwere ike ịchọpụta ngwaọrụ gị iji nye gị ahụmịhe nkeonwe na mgbasa ozi n'ofe ngwaọrụ ị na-eji. N'ebe o kwesiri, anyị ga-anakọta ozi dị otú ahụ site na nkwenye mbụ gị. Biko lee ihe ndị ị họọrọ na ngalaba Kuki anyị maka ozi ndị ọzọ.
Nwere ike ịnweta atụmatụ nke saịtị site na mpaghara ndị ọzọ, forums, na saịtị mgbasa ozi, ọrụ, nkwụnye, na ngwa ('Social Media Sites'). Ntọala nzuzo gị na ndị dị otú ahụ Social Media saịtị, yana iwu nzuzo ha, ga-ekpebi ozi nkeonwe na ozi ndị ọzọ enwere ike ịnakọta ma jiri ya.
Anyị nwere ike ịnweta Ozi banyere ọnọdụ gị, dị ka obodo gị, mgbe ị na-enye ya ma ọ bụ site na ozi ngwaọrụ (dị ka adreesị IP), ma ọ bụ ọnọdụ ngwaọrụ gị mgbe iji ekwentị mkpanaaka nweta saịtị ahụ. N'ebe okwesiri, anyị ga-anakọta ozi dị otu a site na nkwenye mbụ gị.
Kedu iwu iwu anyị nwere maka ịhazi data nkeonwe gị?
Anyị na-ahazi data nkeonwe gị maka ebumnuche ziri ezi. Ejila data nkeonwe gị mee ihe ziri ezi na-adabere na otu ma ọ bụ karịa 'usoro nhazi' iwu enyere na EU General Data Protection Regulation (GDPR).
Tebụl dị n'okpuru nwere nkọwa gbasara oke nke usoro nhazi usoro iwu dị n'okpuru GDPR nke planetlibre na-adabere mgbe ọ na-anakọta Ozi:
Ọrụ nkwekọrịta: ebe anyi choro data nkeonwe gi ka gi na gi banye nkwekọrịta ma nye gi ọrụ anyi.
Ebumnuche ziri ezi: ebe anyị na-eji data nkeonwe gị iji nweta ezigbo mmasị yana ihe kpatara anyị ji eji karịa ajọ mbunobi ọ bụla gbasara ikike nchekwa data gị.
Nkwupụta iwu: ebe data nkeonwe gị dị mkpa maka anyị iji chebe, kpee ikpe ma ọ bụ kwuo ebubo megide gị, anyị ma ọ bụ ndị ọzọ.
Iwu na ikike anyị: ebe achọrọ ka anyị hazie data nkeonwe gị n'okpuru ọrụ iwu kwadoro n'ime EU.
Nkwenye: ebe ị kwere ka anyị jiri data nkeonwe gị (ọ bụrụ na a ga-ewetara gị ụdị nkwenye maka ụdị ojiji a yana ị nwere ike ịwepụ nkwenye gị oge ọ bụla site na ịnye nzuzo@planetlibre.org
Inye ngwaahịa na ọrụ anyị:
Anyị na-eji Ozi anyị nakọtara gbasara gị iji mezuo arịrịọ gị maka ngwaahịa, ngwa, ọrụ, na ọdịnaya yana iji nye, zụlite, lekọta, hazie, chebe, ma melite ahụmịhe gị na onyinye anyị. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-eji Ozi anakọtara na saịtị anyị iji (i) nye ọdịnaya, ngwaahịa, ọrụ, na mmelite (ii) nye ọkwa gbasara akaụntụ gị ma ọ bụ ndebanye aha gị, (iii) na-enyere gị aka ịgụ na biputere azịza, ma ọ bụ (iv) nwee ị banye n'ọkwá, asọmpi, na asọmpi.
Ngalaba Nhazi N'okpuru GDPR:
Imezu nkwekọrịta na nkwekọrịta iwu; yana nkwenye gị (ebe achọrọ)
Mmasị ziri ezi (ebe o kwesịrị ekwesị)
Imeziwanye na ịzụlite ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ; ịba ụba arụmọrụ; ichebe megide wayo; na-ejigide nkọwa gị banyere ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ ndị ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ nwee mmasị na gị, iji wee tụọrọ gị ngwaahịa ndị ọzọ nwere ike ịmasị.
Anyị na-eji Ozi anyị nakọtara na (i) iji zitere gị ozi gbasara nkwalite, onyinye, na atụmatụ anyị, (ii) inye mgbasa ozi dabere na ọdịmma na ọnọdụ gị, (iii) itinye aka na atụmatụ mmekọrịta, mmemme, na saịtị Social Media iji nye gị. ị nwere, ma ọ bụ kwe ka saịtị Social Media nye gị mgbasa ozi dabere na ọdịmma gị, (iv) oge ụfọdụ anyị na-ejikwa Ozi a iji nye, ahịa, ma ọ bụ kpọsaa ngwaahịa, mmemme, ma ọ bụ ọrụ maka gị n'aka anyị na ndị mmekọ anyị, azụmahịa ndị mmekọ, na ndị ọzọ ahọpụtara, ma ọ bụ (v) maka anyị na ndị mmekọ anyị, ndị mmekọ azụmaahịa, ma họrọ ndị ọzọ iji lekwasị anya, nye, ma ọ bụ kpọsaa ngwaahịa, mmemme, ma ọ bụ ọrụ ndị nwere ike ịmasị gị.
Ebumnuche ziri ezi yana na nkwenye gị (ebe achọrọ)
Na-akwalite ngwaahịa na ọrụ anyị nye ndị ọrụ anyị, nye onyinye a haziri ahazi, ohere na ọrụ nwere ike ịmasị gị.
Na-agwa gị okwu.
Anyị na-eji Ozi banyere gị iji kpọtụrụ gị, dị ka (i) iji gwa gị mgbe ị meriri otu n'ime asọmpi anyị ma ọ bụ usoro mgbapụ ma ọ bụ mgbe anyị gbanwere iwu anyị ma ọ bụ usoro anyị, (ii) ịzaghachi ajụjụ gị, ma ọ bụ (iii) ) iji kpọtụrụ gị banyere akaụntụ gị.
Inye na / ma obu ikwuputa ozi di nkpa; ịba ụba arụmọrụ; ijikwa, imeziwanye, ma ọ bụ ịmepụta ọrụ na ngwaahịa ọhụrụ; nchịkọta ọnụ ọgụgụ.
Maka ebumnuche nche yana inyocha wee na-aga n'ihu na saịtị na ọrụ anyị.
Anyị na-eji ozi teknụzụ na ojiji iji melite nhazi anyị, arụmọrụ na ọdịnaya anyị iji nyere anyị aka ịhazi ahụmịhe gị site na ọdịnaya na onyinye anyị. Anyị na-eji Ozi a (i) iji nye, zụlite, chekwaa, hazie onwe ya, chebe, ma melite ngwaahịa, ngwa, na ọrụ anyị, yana iji rụọ ọrụ anyị, (ii) iji mee nyocha, gụnyere iji nyochaa na ịkọ maka ojiji na arụmọrụ , (iii) iji kpuchido, mata, ma gbochie aghụghọ na omume ndị ọzọ akwadoghị, (iv) iji mepụta mkpokọta data gbasara otu ma ọ bụ otu ndị ọrụ anyị, yana (iv) iji gbochie wayo.
Imezu nkwekọrịta na nkwekọrịta iwu, ọdịmma ziri ezi, yana nkwenye gị (ebe achọrọ)
Inyocha ozi sitere na nleta gị na mmekọrịta gị na saịtị iji nwee nghọta ka mma maka ojiji ha ka anyị wee nwee ike ịmalite ahụmịhe onye ọrụ.
Byre ahịa site na iji netwọk mmekọrịta nke atọ.
Anyị na-eji Ozi gị mgbe ị na-emekọrịta mmekọrịta mmekọrịta nke otu ndị ọzọ iji jeere gị ozi mgbasa ozi ma soro gị na netwọk mmekọrịta ndị ọzọ. Nwere ike ịmụtakwu banyere etu atụmatụ ndị a si arụ ọrụ, data profaịlụ anyị nwetara banyere gị, ma chọpụta otu esi apụ site na inyocha ọkwa nzuzo nke netwọkụ mmekọrịta nke ndị ọzọ dị mkpa.
Mmasị ziri ezi, yana nkwenye gị dị ka anyị nwetara ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta ọ bụla nke atọ (ebe achọrọ)
Inyocha ozi site na nleta gị na mmekọrịta gị na saịtị iji nwee nghọta ka mma maka ojiji ha ka anyị wee nwee ike ịmalite ahụmịhe onye ọrụ, nye onyinye, ahaziri na ọrụ ndị nwere ike ịmasị gị.
Nkwenye na ịgbanwe usoro azụmahịa anyị.
Anyị na-eji Ozi anyị nakọtara iji chọpụta, nyochaa, ma gbochie ọrụ ndị na-emebi usoro ojiji anyị, nwere ike ịbụ aghụghọ, mebie ikike nwebisiinka, ma ọ bụ iwu ndị ọzọ, iji rube isi n'iwu chọrọ, yana iji kpuchido ikike anyị na ikike na nchekwa nke ndị ọrụ anyị na ndị ọzọ. Anyị nwekwara ike ịnye data nkeonwe gị na onye ọ bụla nwere ike inweta ma ọ bụ itinye ego na akụkụ ọ bụla nke azụmaahịa planetlibre maka ebumnuche nnweta ma ọ bụ itinye ego ahụ.
Imezu nkwekọrịta na nkwekọrịta iwu
Ikpuchido ebumnuche azụmahịa anyị, ihe onwunwe na ikike ndị ọzọ, ichebe nzuzo, nchekwa na ikike ndị ọzọ nke ọha na eze.
planetlibre na-achịkwa Ozi gị ma bụrụ onye njikwa data dịka akọwara na GDPR. Anyị nwere ike ịkekọrịta ma gosipụta mkpokọta na de-amata Ozi banyere ndị ọrụ anyị na-enweghị mmachi.
Ebe anyị na-etinye ndị na-arụ ọrụ data na-arụ ọrụ nkeonwe na mpụga nke EEA anyị ga-ahụ na a ga-enwe ọkwa nchekwa kwesịrị ekwesị. Na mgbakwunye, anyị ga-etinye usoro iwu na-achịkwa nnyefe dị otú ahụ, dịka ngwa ndị yiri nkebi nkwekọrịta nkwekọrịta, nkwenye ndị mmadụ, ma ọ bụ iwu iwu ndị ọzọ enyere iwu akwadoro.
Commissionfọdụ mba na-abụghị EEA ka ndị European Commission kwadoro ka ha na-enye nchebe zuru oke dị ka iwu nchekwa data EEA. Iwu nchebe data EU na-enye planetlibre ohere ịnyefe data nkeonwe na mba ndị dị otú a. Biko kpọtụrụ anyị na nzuzo@planetlibre.org ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ otu usoro nchebe anyị na-etinye n'ihe metụtara mbupụ nke ozi nkeonwe gị.
Ndị Na-enye Ọrụ . Anyị etinyela ndị na-esote data processors na-ahazi data nkeonwe n'aha anyị: ndị ọrụ anyị, ndị na-enye ọrụ, ndị na-eweta ọdịnaya, yana ndị ọzọ anyị na-eji iji kwado azụmahịa anyị nwere ike ịnweta Ozi iji nyere aka rụọ ọrụ ha na-arụ. maka anyị, gụnyere: ịmepụta, ndozi, nnabata, na ịnapụta saịtị anyị, ngwaahịa na ọrụ anyị; na-eduzi ahia (dịka ọmụmaatụ iji nye gị mgbasa ozi ezubere iche na nkwenye kwesịrị ekwesị); njikwa ịkwụ ụgwọ, email na mmezu iwu; inye asọmpi; na-eme nyocha na nyocha; na ọrụ ndị ahịa.
Ahịa site na ndị mmekọ na ndị ọzọ. Anyị nwere ike igosipụta Ozi na ndị mmekọ, ndị mmekọ azụmaahịa, na ndị ọzọ (dịka, ndị na-ere ahịa, ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, netwọkụ mgbasa ozi na nyiwe, ụlọ ọrụ nyocha, yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ) ndị amụma nzuzo a anaghị ekpuchi omume ha ma ga-eme dị ka onye njikwa. Ndị otu a nwere ike ịnye, nye, melite, ahịa, ma ọ bụghị na ha ga-agwa gị maka ngwaahịa na ọrụ nke aka ha. Anyị ga-ajụrịrị nkwenye gị tupu nkwupụta ọ bụla dị otú ahụ.
Haziri nzukọ na ngalaba-n'ọkwá . Mgbe ụfọdụ anyị na-enye ọdịnaya ma ọ bụ mmemme (dịka, asọmpi, ịsọ asọ, nkwalite, ma ọ bụ njikọta mmekọrịta Social Media) nke ndị ọzọ na-akwado ma ọ bụ na-emekọrịta ihe. Site na mmekọrịta ndị a, ndị ọzọ na-anakọta ma ọ bụ nweta Ozi n'aka gị mgbe ị sonyere na ọrụ ahụ. Anyị enweghị ikike ijikwa Ozi ndị a. Anyị na-agba gị ume ileba anya na nkwupụta nzuzo nke ụdị ndị ọzọ a iji mụta banyere omume data ha tupu ị sonye na ọrụ ahụ.
Saịtị Ejikọtara . Sfọdụ saịtị nwere njikọ nke saịtị ndị ọzọ, gụnyere saịtị Social Media. Anyị nwere ike iwekọta ihu mmemme ngwa mmekọrịta mmadụ na ibe ma ọ bụ nkwụnye ('Plug-ins') sitere na netwọkụ mmekọrịta, gụnyere Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest na ndị ọzọ, na Saiti anyị. Plug-ins nwere ike ịnyefe ozi gbasara gị na ntinye nke ntinye na-enweghị ihe ị mere. Ozi a nwere ike ịgụnye njirimara njirimara njirimara gị, ebe nrụọrụ weebụ ị nọ na ya, na ndị ọzọ. Mmekọrịta na Plug-in ga-ebufe ozi ozugbo na netwọkụ mmekọrịta Plug-in na ndị ọzọ nwere ike ịhụ ozi ahụ n'elu ikpo okwu ahụ. Ihe ntinye usoro na-achịkwa nkwụnye ins, ọ bụghị site na Iwu anyị.
Ebumnuche Iwu na Iwu . Anyị nwere ike igosipụta Ozi na nzaghachi nye usoro iwu, dịka ọmụmaatụ na nzaghachi nye ikike ụlọ ikpe ma ọ bụ akwụkwọ ịkpọ akwụkwọ, ma ọ bụ nzaghachi maka arịrịọ ndị ọrụ mmanye iwu. Anyị nwekwara ike igosipụta Ozi dị otú ahụ na ndị ọzọ: (i) maka ebumnuche nke nchedo aghụghọ na mbelata ihe ize ndụ, (ii) ebe anyị kwenyere na ọ dị mkpa iji nyochaa, gbochie, ma ọ bụ mee ihe gbasara ihe ndị megidere iwu, (iii) iji mezuo iwu ikike anyị na-esite na nkwekọrịta ọ bụla abanye n'etiti gị na anyị, gụnyere Usoro Ojiji, Iwu a, na ịgba ụgwọ na nnakọta, (iv) ma ọ bụrụ na anyị kwenyere na ngosi dị mkpa ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị iji kpuchido ikike anyị, ihe onwunwe anyị, ma ọ bụ nchekwa anyị ma ọ bụ nke ahụ nke ndị ahịa anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ ngo ma ọ bụ ndị ọzọ, (v) dịka iwu chọrọ.
Nkwukọrịta ahịa ahịa na Shakesa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị debanyere aha iji nata akwụkwọ akụkọ na / ma ọ bụ ozi ahịa, ị nwere ohere ịhọrọ mmasị gị n'ihe gbasara ịnweta nkwukọrịta ahịa site n'aka anyị, yana nkesa nke Ozi anyị na ndị mmekọ maka ebumnuche ahịa ha.
ekwentị m na -akpọ oku n'onwe ya
Nwere ike imelite mmasị gị n’ihe gbasara ịnweta nkwukọrịta ahịa sitere n’aka anyị, yana nkesa nke ozi nkeonwe anyị na ndị ọzọ. Nwere ike ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na nzuzo@planetlibre.org . I nwekwara ike pụọ na ịnweta nkwukọrịta ahịa email, site na isoro ntuziaka 'wepu aha' nke enyere na email ọ bụla ị nwetara n'aka anyị. Nwekwara ike ịgbanwe ọkwa ịkwanye na ekwentị mkpanaaka gị site na ngwaọrụ gị ma ọ bụ ntọala ngwa gị.
Nhọrọ Ad . Anyị nwere ike iso ndị ọzọ rụọ ọrụ iji gosipụta mgbasa ozi, ma tinye aka na nnakọta data, mkpesa, nchịkọta saịtị, nnyefe mgbasa ozi na nzaghachi nzaghachi na saịtị anyị yana weebụsaịtị na ngwa ndị ọzọ na oge. Ndị ọzọ a nwere ike iji kuki, mgbama weebụ, pikselụ, na teknụzụ ndị ọzọ yiri ya iji rụọ ọrụ a. Ha nwekwara ike inweta ozi gbasara ebe nrụọrụ weebụ ị gara, ngwa ị na-eji, na ozi ndị ọzọ site n'ofe ihe nchọgharị gị na ngwaọrụ iji gosipụta mgbasa ozi enwere ike ịhazi gị maka ọdịmma gị na saịtị anyị yana n'ofe nyiwe ndị ọzọ. A maara ụdị mgbasa ozi a dịka mgbasa ozi nwere mmasị, enwere ike iji ya jikọta ihe nchọgharị na ngwaọrụ dị iche iche maka ebumnuche nke mgbasa ozi na nyocha.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara mgbasa ozi dabere na mmasị gị na desktọọpụ ma ọ bụ ihe nchọgharị ekwentị gị, yana ike ịpụ na ụdị mgbasa ozi nke ndị ọzọ, biko gaa na Nhọrọ Gị N'ịntanetị na / ma ọ bụ EDAA Onwe-Regulatory Initiative maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi N'ịntanetị . Biko mara na nhọrọ ịpụ apụ ọ bụla ị nwere ike ịme site na mmemme ndị a ga-emetụta naanị mgbasa ozi nwere mmasị site na ndị ọzọ ị họọrọ. Nwekwara ike ịga n'ihu na-enweta mgbasa ozi, mana mgbasa ozi ahụ nwere ike ịdị obere maka ọdịmma gị.
Nwere ike ịnwe nhọrọ karịa dabere na sistemụ arụmọrụ gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka. Ọtụtụ sistemụ nrụọrụ na-enye ntuziaka nke ha otu esi belata ma ọ bụ gbochie nnyefe nke ahaziri maka ngwa ngwa. Nwere ike inyocha ntọala nzuzo na sistemụ arụmọrụ dị otú a iji mụta banyere ịbelata mgbasa ozi ngwa-ahaziri iche. I nwekwara ike gbanyụọ ozi ọnọdụ doro anya site na ekwentị mkpanaaka site na ntọala mbanye na mkpanaka gị ma họrọ ịmelata mkpokọta ahụ.
Iwu COOKIE NA EU
Kuki na Teknụzụ Ndị Ọzọ . Anyị, na ndị mmekọ anyị, ndị na-enye ọrụ ndị ọzọ, na ndị mmekọ azụmaahịa nwere ike izipu 'kuki' na kọmputa gị ma ọ bụ jiri teknụzụ ndị yiri ya iji bulie ahụmịhe ịntanetị gị na saịtị anyị yana site na mgbasa ozi na mgbasa ozi anyị na ntanetị na ngwa ekwentị.
Kuki bụ obere faịlụ ederede nwere ozi nke ebudatara na ngwaọrụ gị mgbe ị gara na weebụsaịtị, gụnyere Saịtị anyị. Mgbe ahụ, a ga-eziga kuki na ngalaba weebụ nke mbụ na nleta gị na ngalaba ahụ. Imirikiti ibe weebụ nwere ihe dị iche iche sitere na ọtụtụ ngalaba weebụ yabụ mgbe ị gara na weebụsaịtị, ihe nchọgharị gị nwere ike ịnweta kuki site n'ọtụtụ ebe. Kuki bara uru n'ihi na ha na-enye ohere ka webusaiti mata ngwaọrụ nke onye ọrụ. Kuki na-enye gị ohere ịnyagharịa weebụsaịtị nke ọma, cheta mmasị na izugbe ahụmịhe onye ọrụ. Enwere ike iji ha dozie mgbasa ozi maka ọdịmma gị site na ị na-enyocha nchọgharị gị na ebe nrụọrụ weebụ. A na-ehichapụ kuki ndị ọrụ na akpaghị aka mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị na kuki ndị na-adịgide adịgide na-adịgide na ngwaọrụ gị mgbe emechiri ihe nchọgharị ahụ (dịka icheta mmasị ndị ọrụ gị mgbe ị laghachiri na saịtị ndị ahụ).
Anyị nwekwara ike iji kuki na teknụzụ ndị ọzọ (i) iji nye, zụlite, chekwaa, hazie, chebe, ma melite Saịtị, ngwaahịa, mmemme na ọrụ anyị yana iji na-azụ ahịa anyị, (ii) ime nyocha, gụnyere inyocha na mkpesa banyere ojiji na arụmọrụ nke saịtị na ahịa anyị, (iii) iji kpuchido, mata, ma gbochie aghụghọ na omume ndị ọzọ na-akwadoghị, (iv) iji mepụta mkpokọta data gbasara otu ma ọ bụ otu ndị ọrụ anyị, (v) iji mekọrịta ndị ọrụ gafee ngwaọrụ, ndị mmekọ, ndị mmekọ azụmaahịa, ma họrọ ndị ọzọ, yana (vi) maka anyị na ndị mmekọ anyị, ndị mmekọ azụmaahịa, ma họta ndị ọzọ iji lekwasị, inye, ma ọ bụ ahịa, ngwaahịa, mmemme, ma ọ bụ ọrụ. Kuki na teknụzụ ndị ọzọ na-akwado ma tụọ arụmọrụ nke mgbasa ozi gosipụtara ma ọ bụ nyefee site na anyị ma ọ bụ site n'aka anyị na / ma ọ bụ netwọk ndị ọzọ ma ọ bụ saịtị.
Ugbu a, anyị anaghị azaghachi akara Esona Nsuso n'ihi na etolitebeghị ụdị ọgbara ọhụrụ teknụzụ. Anyị na-aga n'ihu inyocha teknụzụ ọhụụ ma nwee ike ịnwe ụkpụrụ mgbe emepụtara otu.
Ijikwa kuki na teknụzụ ndị ọzọ.
Ndị a kuki ndị dị mkpa iji mee ka ị nwee ike ịgagharị saịtị ma jiri njirimara ya. Na-enweghị kuki ndị a, a gaghị enye ọrụ ị rịọrọ (dị ka ịgagharị n'etiti peeji). Tebụl na-esote ụfọdụ ihe atụ nke ụdị kuki ndị a:
Anyị na-eji kuki nyocha iji nyochaa otu ndị ọbịa anyị si eji saịtị ahụ ma nyochaa arụmọrụ ha. Nke a na-enye anyị ohere ịnye ahụmịhe dị elu site na ịhazi onyinye anyị na ịchọpụta na idozi nsogbu ọ bụla bilitere. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike iji kuki arụmọrụ iji soro nke ibe ndị kachasị ewu ewu, usoro nke ijikọ n'etiti peeji kachasị dị irè, yana iji chọpụta ihe kpatara ụfọdụ peeji ji enweta ozi ezighi ezi. Anyị nwekwara ike iji kuki ndị a iji gosipụta isiokwu ma ọ bụ ọrụ saịtị nke anyị chere na ọ ga-amasị gị dabere na ojiji nke saịtị. Ozi nke kuki ndị a anakọtara na ozi nkeonwe gị nke anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-ejikwa naanị na mkpokọta na de-mata ụdị. Tebụl na-esote ụfọdụ ihe atụ nke ụdị kuki ndị a:
Pịa ebe a maka iwu nzuzo nke Google maka nkwupụta Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Nwere ike ịpụ na nyocha site na nchịkọta Google site na ịga na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .
Anyị na-eji kuki iji nye gị ụfọdụ ọrụ. Iji maa atụ, ilele ọdịnaya vidiyo, iyi ndị dị ndụ, ma ọ bụ icheta nhọrọ ị mere na iji nye atụmatụ ndị ka mma na ndị ọzọ. A naghị eji kuki ndị a iji nyochaa nchọgharị gị na saịtị ndị ọzọ. Tebụl na-esote ụfọdụ ihe atụ nke ụdị kuki ndị a:
Kuki na-akpọsa (ma ọ bụ na-elekwasị anya na kuki) na-anakọta ozi gbasara omume nchọgharị metụtara na ngwaọrụ gị ma ejiri ya iji mee ka mgbasa ozi dị gị mkpa na ọdịmma gị. Kuki ndị a na-atụle ịdị irè nke mkpọsa mgbasa ozi ma chọpụta ma egosipụtala mgbasa ozi nke ọma. Nwere ike ịnweta EU Consent Manager na n'okpuru nke saịtị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe nhọrọ nkwenye gị. Ndepụta ndị a na-esetịpụrụ ụfọdụ ụdị kuki ndị a:
Isi kuki: DoubleClick:
Pịa ebe a maka iwu nzuzo nke Google maka nkwanye DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
gịnị kpatara na agaghị m ahapụ nkata otu
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụ, ị nwere ike ịme ya https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Kuki Mgbasa Ozi na saịtị Njikọ
Enwere ike iji kuki mgbasa ozi nwere ike iji saịtị mgbasa ozi mmekọrịta sitere na saịtị anyị, dị ka bọtịnụ 'Share' ma ọ bụ ihe ọdịyo / vidiyo na-agbakwunye, na mgbakwunye na ịnye ọrụ a rịọrọ. Saịtị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-enye ọrụ ndị a na nloghachi maka ịmara na gị (ma ọ bụ karịa nke ọma ngwaọrụ gị) garala ụfọdụ weebụsaịtị. Lọ ọrụ mgbasa ozi dị otú a na-etinye kuki mgbasa ozi ma mgbe ị gara na saịtị anyị yana mgbe ị na-eji ọrụ ha wee pụọ na saịtị anyị. A na-akọwapụta kuki nke ụfọdụ saịtị mgbasa ozi mmekọrịta n'okpuru:
Iwu kuki nke Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Iwu kuki nke Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Iwu kuki nke Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Iwu kuki nke Pinterest https://policy.pinterest.com/en/cookies
Iwu kuki nke YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies
Iwu kuki SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/cookies
Iwu Kuki Google Plus: https://policies.google.com/technologies/cookies
Ikike gị iji nweta, mezie na ihichapụ ozi gị
Have nwere ikike ịjụ anyị maka otu Ozi gị, iji dozie ya, hichapụ ya ma ọ bụ machibido nhazi ya, yana inweta Ozi ị nyere. Nwekwara ike ịjụ anyị ka anyị nyefee ụfọdụ Ozi ị nyere ndị ọzọ na kọmputa.
I nwere ikike ịjụ nhazi nke ozi nkeonwe na ndabere nke ọdịmma anyị ziri ezi. Ebe anyị rịọrọ maka nkwenye gị ịhazi Ozi, ị nwere ikike ịdọrọ nkwenye a n'oge ọ bụla.
Ọ bụrụ n’inwee nsogbu na-edozighi, ị nwere ikike ime mkpesa n’aka onye ọrụ EU na-echekwa data ebe ị bi, na-arụ ọrụ ma ọ bụ ebe ị kwenyere na ọ ga-abụ na ọ dara iwu. Biko mara na ụfọdụ anaghị etinye aka na ikike nke ikike ndị a, yabụ ị gaghị enwe ike iji ikike a niile n'ọnọdụ niile.
Ikike ndị a dị n'okpuru ụfọdụ ịwepu iji chebe ọdịmma ọha na eze (dịka mgbochi ma ọ bụ nchọpụta nke mpụ) na ọdịmma anyị (dịka mmezi nke ikike iwu). Oge ụfọdụ, nke a nwere ike ịpụta na anyị nwere ike ijigide Ozi gị ọbụlagodi na ị wepụ nkwenye gị. Anyị ga-aza ọtụtụ arịrịọ n'ime otu ọnwa.
Nwere ike wepu aha na akwụkwọ akụkọ ọ bụla ma ọ bụ ozi ịntanetị nkwalite dị iche iche n'oge ọ bụla site na ịpị njikọ 'wepu aha' nke enyere na nkwukọrịta dị otú ahụ. May gaghị pụọ na nkwukọrịta metụtara saịtị, dị ka nkwenye akaụntụ, ịzụta nkwenye na ozi nhazi, ọ bụrụhaala na ị debanyere aha na saịtị ndị ahụ.
Oge njide anyị maka data nkeonwe dabere na mkpa azụmahịa na iwu chọrọ. Anyị na-ejigide data nkeonwe ruo ogologo oge ọ dị mkpa maka ebumnuche nhazi nke e ji nweta data nkeonwe, yana ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ime, nzube metụtara ya. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ejigide ụfọdụ nkọwa azụmahịa na akwụkwọ ozi ruo oge njedebe maka nkwupụta sitere na azụmahịa ahụ agwụla, ma ọ bụ iji soro usoro iwu chọrọ gbasara njigide data dị otú ahụ.
Anyị emejuputa usoro oru na nhazi kwesịrị ekwesị iji chekwaa data nkeonwe. Nchedo ndị a ga-adịgasị iche dabere na uche, usoro, ọnọdụ, ego, nkesa na nchekwa nke data nkeonwe, ma gụnye usoro ndị ezubere iji chebe data nkeonwe site na nnweta ikike.
Anyị machibidoro ịnweta data nkeonwe na ndị ọrụ na ndị ọzọ na-achọ ịnweta ozi dị otú ahụ maka ezigbo ebumnuche azụmahịa.
Ndị ọrụ anyị niile, ndị ọrụ ngo na ndị ọzọ ga-enwe ike ịnweta data nkeonwe na ntuziaka anyị ga-agbachi na nzuzo ma anyị na-eji njikwa nnweta iji belata ndị mmadụ chọrọ ohere dị otú ahụ maka ịrụ ọrụ nke ọrụ na ọrụ ha.
Anyị nwere atumatu nchekwa ozi n'ebe dị iche iche yana atumatu nchekwa ya yana sistemụ ya ka a na-enyochakarị. Anyị na-eji nchekwa nke akụrụngwa IT anyị kpọrọ ihe.
Ọ bụ ezie na anyị na-akpachapụ anya iji kpuchido ozi nkeonwe gị, anyị enweghị ike ịkwado nchebe nke ozi gị. Ozi ọ bụla nke ozi nkeonwe site na andntanetị na nyiwe mkpanaka adịghị echekwa kpamkpam, yabụ, ịnyefe ozi nkeonwe dị n'ihe ize ndụ gị. Anyị anaghị ahụ maka ịmegharị ntọala nzuzo ọ bụla ma ọ bụ usoro nchekwa anyị nyere.
Nchedo na nchekwa nke ozi gị dabere na gị. Ebe anyị nyere gị (ma ọ bụ ebe ị họọrọ) paswọọdụ maka ịnweta akụkụ ụfọdụ nke saịtị anyị, ị ga-ahụ maka idebe okwuntughe a na nzuzo. Ikwesighi ikesa okwuntughe gi na onye obula.
Nchegbu Nzuzo . Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ọ bụla ma ọ bụ mkpesa banyere nzuzo na saịtị, biko kpọtụrụ anyị na planetlibre Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9NkeAla, East Hollywood, CA, 1312312, U.S.A. ma ọ bụ zitere anyị email na nzuzo@planetlibre.org. Anyị ga-eme ike anyị niile iji zaghachi gị n'oge na ọrụ ọkachamara iji zaa ajụjụ gị ma dozie nsogbu gị.
Und planetlibre Digital Media, LLC. Ikike niile echekwabara. planetlibre na planetlibre.es bụ ụghalaahia edenyere nke planetlibre Digital Media, LLC